Onkoloolessa 25, 2021
Ajajaa waraanaa Sudaan gameesse Lt. Jeneraal Abdel Fattaah al-Burhaan gumii sivilii fi waraanni walitti dhufuun hundeessee fi kan waggoota lamaaf biyyattii hoogganaa ture diiguu dhaan labsii yeroo hatattamaa labsan.
Al-Buraaniin erga humnoonni waraanaa, muummicha ministeeraa Abdallaa Hamdook fi angawoota mana maree waalabaa kanneen biroo to’annaa jala oolchanii booda tuuta oduuf ibsa kennan.
Kan ibsa marsariitii irratti maxxansuu itti fufe ministriin odeeffannoo Sudaan, Hamdook fonqolcha mootummaa waan didaniif jecha to’annaa jala oolan jedhe. Erga Hamdook wixata to’annaa jala oolanii booda hiriirri mormii Kaartuum keessatti geeggeessamuu qabe.
Televiziyoonni naannoo kan Sudaan akka gabaasanitti muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook fonqolcha mootummaa haala fakkaatuun manaa akka hin baane ugguramana.
Maddeen maarii irraa hubachuun Rooyiters akka gabaasetti humnoonni waraanaa wixata har’aa ganama mana muummicha ministeerichaa weeraran. Ministeeronni kaabinee afurii fi miseensonni siivilii tokko kan gumii abbaa biyyummaa Sudaan illee to’annaa jala ooluu Televiiziyoonni Al-Hadath gabaasee jira.
Hoogganoonni paartii fi angawoonni mootummaa itti dabalaa illee to’annaa jala oolanii jiran. Tajaajilli interneetii Kaartuum keessaa addaan cituu gaazixeessonnii fi qabsaa’onni mirga namaa kanneen gamasii gabaasanii jiran. Buufati xayyaaraa sadarkaa addunyaa kan Sudaan cufamee jira.
Ministriin odeeffannoo illee fonqolcha mootummaa sana balaaleffachuu dhaan kanneen hidhaman martinuu akka hiikaman gaafachuu isaa Rooyiters gabaasee jira. Omdurmaan keessaa, humnoonni waraanaa waajjiraalee haadhoo Televiziyoona motummaa fi Raadhiyoo weeraruu dhaan hojjettoota illee to’annaa jala oolchuu gabaasi kun itti dabaluun hubachiiseera.
Mormitoonnis waldaan ogeessota Sudaan kan waldaa daldaltootaa of keessaa qabu wixata har’aa daandilee Kaartuumitti gad ba’anii mootummaa ce’umsaaf eegumsa akka godhan waamicha godhaniifini, hiriira ba’anii jiran.
Hayyuu dinagdee fi diplomaatii ta’uun tokkummaa mootummootaaf hojjetaa kan turan Hamdook Hagayya bara 2019 keessa muummicha ministeeraa mootummaa ce’umsaaf akeekkachiisa kennanii turan.